Fakafaka tononkaloPosté par Berïnson 2015-10-10 04:06
Ny fotoana inona eo amin’ny fitiavana, na ny fifankatiavana no mamy indrindra? Ilay eo am-piandohana vao nifamborahana fihetseham-po sa aorian’ny taona vitsy na maromaro nifankahalalana bebe kokoa sa ilay aorian’ny fotoana nisarahana noho ny antony tsy ho voatanisa? Hafakely fa araka ity tononkalo mitondra ny lohateny hoe ”Fifanenana” hofakafakaina eto ity dia mamy dia mamy tokoa na dia ilay fotoana fohy sady nifanenana no nifandaozana aza.
Izany ka kanto! Tsy noho izy miady rima sy mirafitra ho tononkalo ihany no mahakanto ity tononkalo ity. Tsinontsinona akory aza izany manoloana ny hakanton’ny fitiavana raketiny; fitiavana tsy lazain-teny, fitiavana ahanjahanjan’ny fijery sy fihetsiky ny olon-droa tsy mifankahalala akory; mifanopy maso, mifanara-maso, mifanintona, mifampitsiky, mifandao nefa mifaningotra eritreritra. Ahoana no amoahan’ny poeta ny tononkalo izany rehetra izany?
Baraingo, vinavina, eritreritra no anombohany ny tononkalo entina isarihana ny fahalianan’ny mpamaky. ”Izay tena tao am-pony tsy fantatro mihitsy”, hoy ny andalana voalohan’ny tononkalo toa miantso vonjy amin’ny mpamaky sao mety misy mahafantatra. Amin’ny teny tsotra sy mora azo no andokoan’ny poeta ny fisehoan-javatra rehetra avy eo ka toa hitan’ny maso ery ny fizotran’ny zavatra rehetra. Faritany ny toerana: “an-tenantenana làlana mahitsy”, ny fihetsika madinik’izy roa mifanena, ny maso mody tsy mahita, ny haingo tsara voatra, ny henatra, ny tongotra saika nifamingana, ny maso mifampitodika indray ary ny tongotra roso samy mandeha amin’ny lalany.
Ny antony hafa iray maha-avo lenta ny tononkalo dia ireo olon-droa ao anatiny, tsy voafaritra na ny azo inoana kokoa, niniana tsy nofaritan’ny mpanoratra, na lehilahy na vehivavy. Ny vokany dia na iza na iza, na lehilahy na vehivavy, no mamaky ny tononkalo dia afaka maka sary an-tsaina ny tenany ho ny iray amin’ireo mifanena. Toa miaina ny tantara mihitsy ny tena eo am-pamakiana ary tsy taitra amin’ny nofinofy raha tsy nifarana tamin’ny “Dia izay!!” ny tononkalo. “Dia izay” tsy nisy tohiny. Iza tokoa moa no tsy efa nandia zavatra toy izany saingy avy eo nanadino? Ny an’i R.H.A. Nary na Andrianarinjato Rakotoarisoa Harry noraketiny an-tsoratra tsara rindra ka mitoetra hamohafoha ny fahatsiarovan’ny hafa.